Ozi niile na iOS 9.3, watchOS 2.2, OS X 10.11.4 na tvOS 9.2 | Esi m mac
Egburu | | Apple TV, Apple Watch, iOS, Noticias
Gini bu ihe ojoo nke beta. Izu a amalitela ọtụtụ ọrụ maka ndị mmepe site n'ehihie ụnyaahụ Apple n'otu oge wepụtara nsụgharị beta nke abụọ nke iOS 9.3, watchOS 2.2, OS X 10.11.4 na tvOS 9.2 (naanị ndị mmepe). Anyị na-agwa gị nkọwa niile n'okpuru.
3 TvOS 9.2 beta abụọ
4 watchOS 2.2 beta abụọ
Apple emeela beta nke abụọ nke mmelite na-esote ya na sistemụ arụmọrụ ya ugbu a maka ndị mmepe niile, iOS 9.3, iji mezuo nyocha niile dị mkpa; ọ na-eme izu abụọ mgbe ahapụchara beta mbụ nke iOS 9.3 na ihe karịrị otu ọnwa mgbe mwepụ nke iOS 9.2.
Beta nke abụọ nke iOS 9.3 dị dị ka mmelite site na OTA na site na Mmepụta Center nke Apple.
Dị ka anyị hụrụ na mbipute gara aga, iOS 9.3 gụnyere ọtụtụ atụmatụ ọhụụ, ọ bụ ezie na ihe kachasị dị mkpa bụ iwebata Night Mgbanwe ahụ ma ọ bụ "ọnọdụ abalị", nhọrọ iji mepụta okwuntughe na / ma ọ bụ hazie Touch ID maka iji ha dum ihe edeturu na ngwa ihe edeturu n’ime ngwa a, tinyere ihe ngosiputa ohuru nke ndi n’ile iPhone 6s na 6s Plus nwere ike irite uru, nani ndi nwere 3D Touch.
Ndị na-esonụ video mere MacRumors ibe chịkọtara ndị a na ndị ọzọ na novelties nke iOS 9.3 na i nwere ike mụtakwuo ebe a.
Apple weputara n'ehihie ụnyaahụ (oge Spanish) beta nke abụọ OS X 10.11.4 ndị mmepe maka ule, izu abụọ mgbe ahapụchara beta mbụ nke OS X 10.11.4 na otu izu mgbe emechara ọkwa OS X 10.11.3.
La OS X 10.11.4 nke abụọ beta enwere ike ibudata ya site na Apple Developer Center ma ọ bụ site na ngwanrọ melite ngwanrọ na Mac App Store.
OS X 10.11.4 gụnyere atụmatụ ọhụrụ dịka nkwado maka ederede echekwara na iOS 9.3 Edeturu ngwa agbanyeghị, dịka mmelite OS X 10.11.3 na nso nso a, ọ dịka ọ na-elekwasị anya na obere mmezi ahụhụ na mmezi arụmọrụ na mgbanwe ole na ole na mpụga.
TvOS 9.2 beta abụọ
Na n'out oge ka ntọhapụ nke tvOS 9.1.1 maka Apple TV ọhụrụ Gụnyere ngwa ọhụrụ nke pọdkastị ahụ, Apple ewepụtakwara beta nke abụọ nke tvOS 9.2 maka ndị mmepe niile. Mwepụta a na-abịa izu abụọ mgbe Apple wepụtara beta mbụ nke tvOS 9.2 na, dịka anyị kwuru, awa ole na ole ka ọrụ mmalite nke OS 9.1.1 gasịrị, obere mmelite nke na-esote tvOS 9.1.
9.2 tvOS bụ ihe ọzọ dị mkpa dị mkpa maka sistemụ arụmọrụ nke ọhụrụ Apple TV 4. Ọ ewebata nkwado maka ahụigodo Bluetooth, ya mere ọ ga-adị mfe karị ịbanye ederede, ọrụ nke na-agwụ ike mgbe niile site na ntanetị.
Ke adianade do, ọhụrụ version na-agụnye nhọrọ na ike nchekwa ngwa dịka na ngwaọrụ iOS, nhọrọ dị oke mma nke ga - enyere anyị aka ịnwe isi ihuenyo nke Apple TV anyị ahaziri nke ọma. Ọ gụnyekwara ihu ọhụrụ App Switcher.
9.2 tvOS gụnyekwara nkwado maka ngwa ahụ Podcasts gụnyere na tvOS 9.1.1, na-ewebata ngwa map, nke ndị mmepe nwere ike iji tinye map na Apple TV ngwa ha, ma gbakwunye nkwado Siri maka asụsụ Spanish Spanish (na US naanị) na Canadian French (na Canada). UK, Australian, na US English dịkwa dịka nhọrọ Siri na UK, Australia, na US n'otu n'otu mgbe etinyere asụsụ a na tvOS.
Mana enwere karịa n'ihi na tvOS 9.2 beta abụọ na-enye ohere zuru oke ICloud Photo Library ọ dị na Apple TV. Enwere ike ịrụ ọrụ ya site na ngalaba iCloud na menu Ntọala. Na ụdị tvOS nke ọha ugbu a, ndị ọrụ nwere ike ịlele ọdịnaya Stream Stream.
N'ikpeazụ, ịnweta iCloud Photo Library na-abịa na nkwado maka Foto Live echekwara na ọba foto foto iCloud nke enwere ike igwu egwu site na ịpị Siri Remote touch panel.
watchOS 2.2 beta abụọ
Anyị na-ejedebe beta nke abụọ 2.2 nche nche, sistemu eji arụ ọrụ nke obere ngwaọrụ nke ndị si Cupertino, Apple Watch mere.
Beta nke abụọ nke mmelite ọzọ 2.2 nche nche maka ndị mmepe eweputara Apple n'ehihie ụnyaahụ, izu abụọ mgbe ịhapụchara beta mbụ na ihe karịrị otu ọnwa mgbe ebuputachara watchOS 2.1, mmelite izizi mbụ na sistemụ arụmọrụ 2 nke na-eche nche na Manzana.
Nke abuo beta nke 2.2 nche nche Enwere ike ibudata ya site na ngwa Apple Watch na iPhone, ọ bụrụhaala na ọ na-agba iOS 9.3 beta. Iji wụnye mmelite ahụ, Apple Watch ga-enwerịrị ma ọ dịkarịa ala batrị 50%, ọ ghaghị ijikọ ya na chaja ma nọrọ n'ime nso nke iPhone.
watchOS 2.2, yana iOS 9.3, na-ewebata nkwado maka ijikọ ọtụtụ elekere Apple na otu iPhone.
Ewezuga nke a, watchOS 2.2 na-elekwasị anya na ndozi arụmọrụ yana mmezi ahụhụ.
ISI IHE | MacRumors y Uhie
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Ngwaahịa Apple » Apple TV » Ozi niile na iOS 9.3, watchOS 2.2, OS X 10.11.4 na tvOS 9.2